ဘာဘေးဒိုးစ | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ဘာဘေးဒိုးစ
ကာရစ်ဘီယံ Cruise နဲ့ ‘ A Journey across the Water
It gets boring staring at the ocean2out of3နေ့ရကျ. Although ship's activities are very many these days, afterawhile you'll get bored with them. Cabins in general are very small, so afterawhile you're going to miss your large living room on the mainland with its 75" TV. သို့သော်, if6months are too long, there are other alternatives; Cruise maybeacouple of monthsayear.
There has beenalot of buzz lately about living onaCruise Ship full time as an alternative to living inaretirement home. သို့သော်, I don't think it would be very exciting after about6months or so. Ships, even Cruise Ships, are noisy for at least2reasons: 1. Engine Noise. No matter how new the ship, no matter what new turbine engines the ship may have, အ 24 hour engine noise may get to people. 2. Parties, ဘားနှင့်စားသောက်ဆိုင်. There is alwaysakind of...
The Caribbean A vacation at one of the islands in the Caribbean offers excitement as well as relaxation inastunning, tropical setting. The eastern region of the islands, commonly known as the Lesser Antilles, တိုဘာဂိုနှင့်ထရီနီဒက်, begins just east of Puerto Rico and stretches just about to the coast of Venezuela. These islands include impressive mountains, rain forests and black, as well as white, သဲကမ်းခြေ. The western portion of the Caribbean is well-known for the...
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်းကာရစ်ဘီယံပင်လယ်အတွင်းအပြောင်အန်တီတစ်ကျွန်း Nation သည်နှင့်တစ်ဦးကာရစ်ဘီယံအားလပ်ရက်အထုပ်တစ်ခုလျော့နည်းမကြာခဏအစက်အပြောက်ဖြစ်ပါသည်, လူသိများဖြစ်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့သေးငယ်တဲ့ကျွန်းအများအပြားရှိနေသော်လည်း. စိန့်ဗင်းဆင့်သူ့ဟာသူတူကျွန်းစု, Bequia, Mustique, လက်ဝါး, Canouan, Carriacou, ကျစ်လျစ်သေးသွယ်မာတီနစ်, ပြည်ထောင်စု, ရှိသမျှသည်အများသောအားလပ်ရက်ဘရိုရှာ၌ထင်ရှား, ဒါပေမဲ့တစ်နည်းနည်းနဲ့အဆိုပါဂရိအမည်မသိနေဆဲဖြစ်ပြီးတစ်နည်းနည်းနဲ့ရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းပိတ်ထား. တောင်မှ t ကိုမှဘယ်သူကိုများအတွက်ခရီးစဉ်သဘောင်္သားများအတွက် ...
မိသားစုများသန်းပေါင်းများစွာနှစ်စဉ်အတူတကွနွေရာသီအားလပ်ရက်ယူ. တစ်ခုလုံးကိုမိသားစုနှင့်အတူခရီးသွားတစ်ဦးအံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမဲ့သင်နှင့်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးတည်းအချို့သောအချိန်လိုအပ်သည့်အခါကြိမ်ရှိပါတယ်. တစ်ဦးကရင်ခုန်စရာထွက်ပြေးဖို့သင်လိုအပ်မယ့်အဘယျသို့ဖြစ်စေခြင်းငှါနဲ့, ကံကောင်းစွာ, ကနေရှေးခယျြဖို့အကြိမ်ကြိမ်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်. တစ်ဦးရင်ခုန်စရာနွေရာသီထွက်ပြေးဖို့ရွေးချယ်သောအခါစဉ်းစားရန်ပထမဦးဆုံးအရာအချစ်ဇာတ်လမ်းသင်တို့အားဆိုလိုသည်ကားအဘယ်သို့. အချို့သောလုပ်ငန်းများသို့မဟုတ် setting များကိုဖျက်ဆီးတတ်လျှင်အဖြစ်တချို့ကခံစား 'အစိတ်ဓါတ်များ။ ' ' ဒီအတွက်ကြောင့်,...
ကွောကျ Be. အလွန်ကြောက် Matey Be ‘ Pirate အလံများ၏မူလအစ
နာမည်ကြီးပင်လယ်ဓားပြအပေါ်နောက်ခံနှင့်အတူပင်လယ်ဓားပြအလံ၏ဇာစ်မြစ်သို့တစ်ဦးကကြည့် "Black က Bart".
Barbados isagreat destination to visit on your holiday to the Caribbean. Barbados lies in the southern Caribbean, close to the South America continent. The climate is tropical, with mild temperatures kept bearable by the winds off the Atlantic Ocean. The island has the nickname 'little England' owing to the stamp that the British left on this former colony. The national obsession is cricket - like many other former British colonies in the Caribbean. This suits the relaxed l...
Endowed with rich natural beauty, the famous island nation of Barbados is located in the east of Caribbean Sea, near Puerto Rico, and isapart of the Lesser Antilles. This island was discovered in 1536 by the Portuguese, နှင့် 90 years later it was colonized by the British. It became an independent member of the Commonwealth in 1966 after beingaBritish colony for over 300 အနှစ်. The citizens of Barbados are officially called Barbadians. The localized pronunciation of the word Barbadian is "Bajan". The tradition and culture of Barbados is still quite conservative, as wearing clothes like bikinis is not at all appreciated in the town and churches.
If your idea includes relaxing and rejuvenating, then you know that you need to visitaspa. Not all spas, or travelers, are the same, သို့သော်, so it is important to do your research beforehand so that you can find the right spa for you. Research the treatments and the costs so that you can find the right spa for you, your lifestyle, and your budget. 1. Disney's Grand Floridian Resort & Spa Are you takingavacation with your entire family? You do not have to foreg...
ကာရစ်ဘီယံ VillasEveryones စံပြအားလပ်ရက်
ပြောလိုက်ပါတစ်ဦးကရစ်ဘီယံအားလပ်ရက်စီစဉ်ပေမယ့်နေဖို့ဘယ်မှာ၏မသေချာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, တစ်ကရစ်ဘီယံ villa ထက်မထပ်မံကြည့်ရှု. အဲဒီအစားတစ်ဦး Bland ဟိုတယ်တွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးထုပ်ပိုးခရုဇ်သင်္ဘောပေါ်တွင်သင်၏ရက်ပေါင်းဖြုန်းခြင်းထက်, တစ်ဦးထက်ပိုအဆင်ပြေကိုရှေးခယျြ, အတွက်အပန်းဖြေဖို့ကျယ်ဝန်း villa. ဒုက္ခသွားရောက်ရသောကျွန်းရွေးချယ်ရာတွင်? မျိုးစုံခရီးစဉ်တစ်ခရုဇ်စဉ်းစား? ထပ်စဥ်းစား. ခရီးစဉ် timeusually သာအနည်းငယ် hoursfor ခရီးသွားတွေတိုတောင်းတဲ့ငွေပမာဏကိုတဦးတည်းတည်နေရာအတွက်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုအတော်များများ cruises. tryin မြင်ယောင်ကြည့်ပါ ...
The Caribbean isagreat place to travel asacheap holiday destination. Every island offersadifferent story and you feel the diversity surrounding you. The culture of the different islands is what makes the Caribbean cheap holidayamemorable experience. You might decide to visit the Bahamas, ဂျမေကာ, St Lucia or Barbados forarelaxed and exciting holiday vacation. The areas are filled with resorts and hotels as well as villas and home rentals that can enhance your stay o...
If you've got the travel bug but don't have the funds, you may feel likeadestination vacation isadistant dream. Not so! Traveling onabudget has never been easier, and if you think budget means dirty communal hostels, ထပ်စဥ်းစား.
ထိုင်း(Heart Of Asia) အားလပ်ရက်
Travel Writing: သင်သိပါရန်လိုအပ်အားလုံး
အမျိုးသားဥယျာဉ်အားလပ်ရက် Adventures ကို
တစ်ဦးက chic ဟိုတယ်၌ခုနှစ်တွင်ကျင်းပ!
ပြတ်လပ် Going မရှိရင်အမ်စတာဒမ်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ဘယ်လို